Inkonzo yase China exhasa zonke iintlobo zezinto zokubopha UKUKHULA-Elec
I-Fastener ligama eliqhelekileyo lohlobo lwamalungu asetyenzisiweyo ukukhawulezisa nokudibanisa iinxalenye ezimbini okanye ezingaphezulu (okanye izinto) ngokupheleleyo. Ikwabizwa ngokuba ngamalungu asemarike.
Ihlala iquka ezi ntlobo zili-12 zilandelayo:
Iibholiti, izikroba, izikrufu, amandongomane, izikrufu zokuzibamba, izikrufu zomthi, iiwasher, ukugcina amakhonkco, izikhonkwane, iirivets, iindibano kunye nokudibanisa izibini, iinzipho zentsimbi.
(1) Bolt: luhlobo lokuvala oluqulathwe yintloko kunye nesikulufu (isilinda ngentambo yangaphandle), efuna ukuhambelana nenutin ukuze ibambe kwaye idibanise iinxalenye ezimbini ngemingxunya. Olu hlobo lonxibelelwano lubizwa ngokuba luqhagamshelo lwe-bolt. Ukuba i-nut ayikhutshiwe kwi-bolt, la macandelo mabini anokwahlulwa, ke uqhagamshelo lwe-bolt lolonxibelelwano olususwayo.
(2) Stud: uhlobo lokuvala ngaphandle kwentloko kwaye kuphela yimisonto yangaphandle kuzo zombini iziphelo. Xa uqhagamshela, isiphelo esinye kufuneka sikrukrisiwe kwinxalenye kunye nomngxunya wangaphakathi wentambo, esinye isiphelo kufuneka sidlule kwinxalenye ngembobo, emva koko sijije kwi-nut, nokuba la macandelo mabini axhumene ngokuqinileyo ngokupheleleyo. Le fom yoqhagamshelo ibizwa ngokuba kukunxibelelana kwe-stud, ekwangunxibelelwano olususwayo. Isetyenziswa ikakhulu xa elinye lala malungu aqhagamshelekileyo enobukhulu obukhulu, lifuna ubumbano, okanye alulungelanga uqhagamshelo lwe-bolt ngenxa yokuqaqanjelwa rhoqo.
(3) Screw: nayo luhlobo lokuvala equlathe entloko Screw. Inokwahlulwahlulwa ibe ziindidi ezintathu ngokwenjongo: Isakhelo sesinyithi, iseti yokujija kunye nenjongo ekhethekileyo yokujija. Izikrufu zoomatshini zisetyenziselwa uxhulumaniso olubophelelayo phakathi kwenxalenye enomngxunya osisigxina kunye nenxalenye enemingxunya, ngaphandle kokutshatisa kwenathi (le fomu yoqhagamshelo ibizwa ngokuba kukudibanisa iscrew, ekwanonxibelelwano olususekayo; Inokufaniswa nayo I-nut yokuxhuma ngokukhawuleza phakathi kweendawo ezimbini kunye nemingxuma. Izikrufu zenjongo ekhethekileyo, ezinje nge-eyebolt, zisetyenziselwa ukuphakamisa iinxalenye.
(4) Nut: kunye umngxuma yangaphakathi umsonto, imilo ngokubanzi flat ezinamacala tyaba, okanye ikholam tyaba macala okanye zezindlu tyaba. Isetyenziselwa ukubopha nokuqhagamshela iinxalenye ezimbini zizonke ngeebholithi, izikhonkwane okanye izikhonkwane zentsimbi.
(5) Isikrufu sokucofa ngokwakho: esifana nesikrufu, kodwa umsonto kwisikrufu ngumsonto okhethekileyo wokuzibamba. Isetyenziselwa ukubopha nokuqhagamshela izinto ezibini ezingcakacileyo zentsimbi zibeyonke. Imingxunya emincinci kufuneka yenziwe kwicandelo kwangaphambili. Ngenxa yokuba isikrufu sinobunzima obuphezulu, sinokuqunjelwa ngqo emngxunyeni wecandelo ukwenza imisonto ehambelana nayo ngaphakathi kwicandelo. Le fom yoqhagamshelo ikwangonxibelelwano olususwayo.
(6) Isikulufa somthi: siyafana nesikrufu, kodwa umsonto kwisikrufu ngumsonto okhethekileyo wokujija iinkuni, onokuthi uqhotyoshelwe ngqo kwicandelo lomthi (okanye kwinxalenye) ukuze uqhagamshele ngokuqinileyo isinyithi (okanye isinyithi) ) Inxalenye yomngxuma onento eyenziwe ngomthi. Olu nxibelelwano lukwanonxibelelwano olunokukhangela.
(7) yomsuki weengubo: uhlobo lokuvala kunye imilo tyaba setyhula. Ibekwe phakathi kwendawo yokuxhasa iibholiti, izikrufu okanye amandongomane kunye nomphezulu wamalungu okudibanisa, adlala indima yokwandisa indawo yokunxibelelana kweendawo ezinxibeleleneyo, ukunciphisa uxinzelelo kwiyunithi yendawo kunye nokukhusela umphezulu wamalungu axhunyiwe kumonakalo; Olunye uhlobo lwe-washer ye-elastic inokuthintela i-nut ekukhululeni.
(8) Ukugcina umsesane: kufakwe kwi-shaft groove okanye kumngxunya womngxuma wolwakhiwo lwesinyithi kunye nezixhobo zokuthintela iinxalenye ezikwishafti okanye emngxunyeni ukusuka ngasekhohlo nasekunene.
(9) I-Pin: isetyenziselwa ukubeka indawo, kwaye ezinye zinokusetyenziselwa ukudibanisa iinxalenye, ukulungisa iindawo, ukuhambisa amandla okanye ukutshixa ezinye izinto zokubopha.
(10) Rivet: luhlobo lokuvala oluqulathe intloko kunye nentonga yesikhonkwane, esetyenziselwa ukubopha nokudibanisa iinxalenye ezimbini (okanye izinto) ngemingxunya yokubenza baphelele. Olu hlobo lonxibelelwano lubizwa ngokuba luqhagamshelo lwe-rivet, okanye i-riveting ngokufutshane. Lunxibelelwano olungasuswayo. Ngenxa yokwahlulahlula la malungu mabini axhumene ngokudibeneyo, ii-rivets ezikwiinxalenye kufuneka zitshatyalaliswe.
(11) Indibano kunye nesibini esidibanisa Isibini soqhagamshelo sibhekisa kuhlobo lokuvala oludibanisa i-bolt ekhethekileyo, i-nut kunye ne-washer, njengokuqina okuphezulu kwe-hexagon enkulu ye-bolt yentloko yentsimbi yesakhiwo sentsimbi.
(12) Welding isikhonkwane: ngenxa lokuvala dissimilar iqulathe ngentonga ze kunye isikhonkwane entloko (okanye akukho entloko isikhonkwane), oko iqhagamshele ngokuqinileyo enye inxalenye (okanye icandelo) yi welding, ukuze ukudibanisa namanye amalungu.
Egqithileyo Inkonzo ye-OEM ODM yensimbi
Okulandelayo: Inkonzo ye-OEM ODM yokulungisa ulwenziwo
Izinto zokubopha ezichanekileyo
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izahlulo Ihowuliseyili, Ukulahlwa kweMagnesium, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Plate Intwasahlobo, Izikrufu, Zonke iiMveliso